ဒုတိယမြောက် ရွှေရောင်မျိုးဆက်လို့ တင်စားရမယ့် စုဖွဲ့မှုနဲ့ စောင့်ကြည့်ရမယ့် ဒိန်းမတ်အသင်း
16 Jun 2018 . 4:50 AM
၁၉၉၀ ကာလအပိုင်းအခြားတွေက ဒိန်းမတ်တို့အတွက် ရွှေရောင်လွှမ်းခဲ့တဲ့ ကာလတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခွဲထွက်ရေး စစ်ပွဲတွေကြောင့် နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ ယူဂိုဆလားဗီးယားအသင်းရဲ့ နေရာမှာ ခြေစစ်ပွဲ မအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် ဒိန်းမတ်အသင်း ယူရို-၉၂ ပြိုင်ပွဲကို အစားထိုး ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ကျော် ဂိုးသမား ပီတာရှမိုက်ကယ်၊ ကွင်းလယ်လူ လောဒရပ်၊ တိုက်စစ်မှူး လာဆင်တို့ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ ယူရိုချန်ပီယံအဖြစ် အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ကျင်းပတဲ့ တိုက်ကြီးများဖလားပြိုင်ပွဲကို ဥရောပ ချန်ပီယံအနေနဲ့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ပြင်သစ်မြေမှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ကွာတားဖိုင်နယ်အထိ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ အသင်းကို စတင်ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ နော်ဝေးလူမျိုးနည်းပြ ဟာရိုက်ဒ် လက်ထက်မှာ ပုံစံကောင်းတွေ ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ ဒိန်းမတ်အသင်းက တောင့်တင်းတဲ့ စုဖွဲ့မှုနဲ့အတူ အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်တဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တစ်ကျော့ပြန် တက်လှမ်းနိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေပါတယ်။
၁၉၅၈ ပြိုင်ပွဲကစလို့ တောက်လျှောက် ခြေစစ်ပွဲ ၀င်ခဲ့ပေမယ့် ၁၉၈၆ ပြိုင်ပွဲမှ ပထမဆုံးအကြိမ် ခြေစစ်ပွဲအောင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးအဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ၁၉၈၆ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာတင် ရှုံးထွက်အဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် စပိန်အသင်းကို ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားသမိုင်းတစ်လျှောက် (၄)ကြိမ် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ ပြိုင်ပွဲမှာ ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာကတော့ ဒိန်းမတ်အသင်းအတွက် အမြင့်ဆုံး အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး မျိုးဆက် ကစားသမားတွေရဲ့ စုဖွဲ့မှုနဲ့အတူ ကွာတားဖိုင်နယ် အဆင့်ထိ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် နာမည်ကြီး ဘရာဇီးလ်အသင်းကို (၂-၃)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ (၄)ကြိမ် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာမှာ (၃)ကြိမ် အုပ်စုအဆင့်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီး တောင်အာဖရိကမြေမှာ ကျင်းပတဲ့ ၂၀၁၀ ပြိုင်ပွဲမှာတော့ အုပ်စုအဆင့်နဲ့ပဲ ကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့ ခြေစစ်ပွဲ မအောင်မြင်ခဲ့လို့ ပြိုင်ပွဲနဲ့ လွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။
ခြေစစ်ပွဲ အနေအထားအရ အုပ်စုချောင်ခဲ့ပေမယ့် ပိုလန်အသင်းကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ ခြေစစ်ပွဲတိုက်ရိုက် အောင်ခွင့်နဲ့ လွဲချော်ခဲ့ရပြီး ခြေစစ်ပွဲ ဒုတိယအဆင့်ကို ထပ်မံကစားခဲ့ရပါတယ်။ ခြေစစ်ပွဲ (၁၀)ပွဲ ကစားခဲ့ရာမှာ (၆)ပွဲနိုင်၊ (၂)ပွဲသရေ၊ (၂)ပွဲရှုံး၊ ရမှတ် (၂၀)နဲ့ ပိုလန်အသင်းရဲ့ နောက် အုပ်စုဒုတိယနေရမှာ ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ ခြေစစ်ပွဲ ဒုတိယအဆင့်အဖြစ် အိုင်ယာလန်အသင်းနဲ့ ကစားခဲ့ရပြီး အိမ်ကွင်းမှာ ဂိုးမရှိသရေ ကျခဲ့ပေမယ့် အဝေးကွင်းမှာ (၁-၅)ဆိုတဲ့ ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲနဲ့ ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ကွင်းလယ်လူ အဲရစ်ဆင်က ခြေစစ်ပွဲတစ်လျှောက် (၁၀)ဂိုးအထိ သွင်းယူပေးခဲ့ပြီး အသင်းကို ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်အောင် အဓိကနေရာက စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ရွှေရောင် မျိုးဆက် ကစားသမားတွေအပြီး ဒိန်းမတ်အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး စုဖွဲ့မှုလို့ ပြောရမယ့် လူစာရင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ ဥရောပကလပ်အသင်း အများစုမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ကစားသမားတွေကို ရွေးချယ်ထားပြီး လူငယ်ကစားသမား အများစု ဦးစားပေးရွေးချယ်ထားပါတယ်။ ရွှေရောင်မျိုးဆက် ဂိုးသမား ပီတာရှမိုက်ကယ်ရဲ့သား ကတ်စ်ပါရှမိုက်ကယ်က အဓိက ဂိုးသမားအဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဟတ်ဒါဖီးလ်မှာ လက်စွမ်းပြခဲ့တဲ့ လိုဆယ်လ်ကလည်း အသင့်အစားထိုးနိုင်တဲ့ ဂိုးသမားဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တန်းမှာတော့ အသင်းခေါင်းဆောင် ဆိုင်မွန်ကေဂျာ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက ကလပ်အသင်းတွေမှာ ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ လူငယ်နောက်ခံလူတွေဖြစ်တဲ့ ဗတ်စ်တာဂတ်၊ ခရစ္စတန်ဆင်နဲ့ လာဆင်တို့လို ကစားသမားတွေကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ ဒိန်းမတ်အသင်းရဲ့ စုဖွဲ့မှု အကောင်းဆုံးကတော့ ကွင်းလယ်ဖြစ်ပြီး ၀ါရင့်ကွင်းလယ်လူ ဒဲလ်လီအပါအ၀င် အဲရစ်ဆင်၊ ဒီလာနီ၊ ဖစ်ရှာ၊ ဆစ်တိုတို့လို ပုံစံကောင်း ပြနေတဲ့ ကစားသမားတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ ဝါရင့်တိုက်စစ်ကစားသမား ဘန်တနာ ဒဏ်ရာကြောင့် နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပေမယ့် ဂိုးသွင်းခြေရှိတဲ့ ယော်ဟန်ဆင်၊ ဘရိန်းအေတီ၊ ကော်နီလစ်တို့လို ကစားသမားတွေကို ခြေစွမ်းထက် လူငယ်တိုက်စစ် ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ယူဆက်ဖ်ပေါ်လ်ဆင်၊ ဒိုးလ်ဘတ်ဂ်တို့လို ကစားသမားတွေကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ ကွင်းလယ်ကစားသမား အဲရစ်ဆင်ကတော့ ဒိန်းမတ်အသင်းအတွက် အဓိက စောင့်ကြည့်သွားရမယ့် ကစားသမား ဖြစ်ပါတယ်။ ပြစ်ဒဏ်ဘော တိုက်ရိုက်ကန်သွင်းမှုတွေ၊ သေသပ်တဲ့ အဝေးကန်ချက်တွေ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ဖြတ်တင်ပေးပို့မှုတွေက အဲရစ်ဆင်ရဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုလိုပါပဲ။ လာမယ့် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာကော အဲရစ်ဆင် ပုံစံကောင်းတွေ ပြသနိုင်ဦးမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ချင်စရာ ကောင်းနေပါတယ်။
Photo:Socceroos, Onefootball, Independent
ဒုတိယမွောကျ ရှရေောငျမြိုးဆကျလို့ တငျစားရမယျ့ စုဖှဲ့မှုနဲ့ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ့ ဒိနျးမတျအသငျး
၁၉၉၀ ကာလအပိုငျးအခွားတှကေ ဒိနျးမတျတို့အတှကျ ရှရေောငျလှမျးခဲ့တဲ့ ကာလတှဖွေဈခဲ့ပါတယျ။ ခှဲထှကျရေး စဈပှဲတှကွေောငျ့ နှုတျထှကျခဲ့တဲ့ ယူဂိုဆလားဗီးယားအသငျးရဲ့ နရောမှာ ခွစေဈပှဲ မအောငျမွငျခဲ့ပမေယျ့ ဒိနျးမတျအသငျး ယူရို-၉၂ ပွိုငျပှဲကို အစားထိုး ယှဉျပွိုငျခှငျ့ ရခဲ့ပါတယျ။ နာမညျကြျော ဂိုးသမား ပီတာရှမိုကျကယျ၊ ကှငျးလယျလူ လောဒရပျ၊ တိုကျစဈမှူး လာဆငျတို့ရဲ့ ဦးဆောငျမှုနဲ့အတူ ယူရိုခနျြပီယံအဖွဈ အောငျပှဲခံနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၉၅ ခုနှဈမှာ ကငျြးပတဲ့ တိုကျကွီးမြားဖလားပွိုငျပှဲကို ဥရောပ ခနျြပီယံအနနေဲ့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့ပွီး ခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၉၈ ခုနှဈ ပွငျသဈမွမှော ကငျြးပပွုလုပျတဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျခဲ့ပွီး ကှာတားဖိုငျနယျအထိ တကျရောကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ အသငျးကို စတငျကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ နျောဝေးလူမြိုးနညျးပွ ဟာရိုကျဒျ လကျထကျမှာ ပုံစံကောငျးတှေ ပွသနိုငျခဲ့တဲ့ ဒိနျးမတျအသငျးက တောငျ့တငျးတဲ့ စုဖှဲ့မှုနဲ့အတူ အမွငျ့ဆုံးအောငျမွငျမှုဖွဈတဲ့ ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့ကို တဈကြော့ပွနျ တကျလှမျးနိုငျမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးနပေါတယျ။
၁၉၅၈ ပွိုငျပှဲကစလို့ တောကျလြှောကျ ခွစေဈပှဲ ဝငျခဲ့ပမေယျ့ ၁၉၈၆ ပွိုငျပှဲမှ ပထမဆုံးအကွိမျ ခွစေဈပှဲအောငျခဲ့ပါတယျ။ ပထမဆုံးအဖွဈ ယှဉျပွိုငျတဲ့ ၁၉၈၆ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာတငျ ရှုံးထှကျအဆငျ့ကို တကျရောကျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ စပိနျအသငျးကို ဂိုးပွတျရှုံးနိမျ့ခဲ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားသမိုငျးတဈလြှောကျ (၄)ကွိမျ ယှဉျပွိုငျခဲ့ပွီး ၁၉၉၈ ပွိုငျပှဲမှာ ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့ကို တကျရောကျနိုငျခဲ့တာကတော့ ဒိနျးမတျအသငျးအတှကျ အမွငျ့ဆုံး အောငျမွငျမှုဖွဈပါတယျ။ အကောငျးဆုံး မြိုးဆကျ ကစားသမားတှရေဲ့ စုဖှဲ့မှုနဲ့အတူ ကှာတားဖိုငျနယျ အဆငျ့ထိ တကျရောကျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ နာမညျကွီး ဘရာဇီးလျအသငျးကို (၂-၃)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ရပါတယျ။ (၄)ကွိမျ ယှဉျပွိုငျခဲ့ရာမှာ (၃)ကွိမျ အုပျစုအဆငျ့ကို ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့ပွီး တောငျအာဖရိကမွမှော ကငျြးပတဲ့ ၂၀၁၀ ပွိုငျပှဲမှာတော့ အုပျစုအဆငျ့နဲ့ပဲ ကနြေပျခဲ့ရပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာတော့ ခွစေဈပှဲ မအောငျမွငျခဲ့လို့ ပွိုငျပှဲနဲ့ လှဲခြျောခဲ့ရပါတယျ။
ခွစေဈပှဲ အနအေထားအရ အုပျစုခြောငျခဲ့ပမေယျ့ ပိုလနျအသငျးကို ကြျောဖွတျနိုငျခွငျးမရှိလို့ ခွစေဈပှဲတိုကျရိုကျ အောငျခှငျ့နဲ့ လှဲခြျောခဲ့ရပွီး ခွစေဈပှဲ ဒုတိယအဆငျ့ကို ထပျမံကစားခဲ့ရပါတယျ။ ခွစေဈပှဲ (၁၀)ပှဲ ကစားခဲ့ရာမှာ (၆)ပှဲနိုငျ၊ (၂)ပှဲသရေ၊ (၂)ပှဲရှုံး၊ ရမှတျ (၂၀)နဲ့ ပိုလနျအသငျးရဲ့ နောကျ အုပျစုဒုတိယနရေမှာ ရပျတညျခဲ့ပါတယျ။ ခွစေဈပှဲ ဒုတိယအဆငျ့အဖွဈ အိုငျယာလနျအသငျးနဲ့ ကစားခဲ့ရပွီး အိမျကှငျးမှာ ဂိုးမရှိသရေ ကခြဲ့ပမေယျ့ အဝေးကှငျးမှာ (၁-၅)ဆိုတဲ့ ဂိုးပွတျနိုငျပှဲနဲ့ ခွစေဈပှဲ အောငျမွငျခဲ့တယျ။ ကှငျးလယျလူ အဲရဈဆငျက ခွစေဈပှဲတဈလြှောကျ (၁၀)ဂိုးအထိ သှငျးယူပေးခဲ့ပွီး အသငျးကို ခွစေဈပှဲ အောငျမွငျအောငျ အဓိကနရောက စှမျးဆောငျပေးခဲ့ပါတယျ။
ရှရေောငျ မြိုးဆကျ ကစားသမားတှအေပွီး ဒိနျးမတျအသငျးရဲ့ အကောငျးဆုံး စုဖှဲ့မှုလို့ ပွောရမယျ့ လူစာရငျးကို ပိုငျဆိုငျထားတယျ။ ဥရောပကလပျအသငျး အမြားစုမှာ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ ကစားသမားတှကေို ရှေးခယျြထားပွီး လူငယျကစားသမား အမြားစု ဦးစားပေးရှေးခယျြထားပါတယျ။ ရှရေောငျမြိုးဆကျ ဂိုးသမား ပီတာရှမိုကျကယျရဲ့သား ကတျဈပါရှမိုကျကယျက အဓိက ဂိုးသမားအဖွဈ ရှေးခယျြခံခဲ့ရပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဟတျဒါဖီးလျမှာ လကျစှမျးပွခဲ့တဲ့ လိုဆယျလျကလညျး အသငျ့အစားထိုးနိုငျတဲ့ ဂိုးသမားဖွဈပါတယျ။ နောကျတနျးမှာတော့ အသငျးခေါငျးဆောငျ ဆိုငျမှနျကဂြော ဦးဆောငျမှုနဲ့အတူ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက ကလပျအသငျးတှမှော ခွစှေမျးပွခဲ့တဲ့ လူငယျနောကျခံလူတှဖွေဈတဲ့ ဗတျဈတာဂတျ၊ ခရစ်စတနျဆငျနဲ့ လာဆငျတို့လို ကစားသမားတှကေို ရှေးခယျြထားပါတယျ။ ဒိနျးမတျအသငျးရဲ့ စုဖှဲ့မှု အကောငျးဆုံးကတော့ ကှငျးလယျဖွဈပွီး ဝါရငျ့ကှငျးလယျလူ ဒဲလျလီအပါအဝငျ အဲရဈဆငျ၊ ဒီလာနီ၊ ဖဈရှာ၊ ဆဈတိုတို့လို ပုံစံကောငျး ပွနတေဲ့ ကစားသမားတှေ ပါဝငျနပေါတယျ။ တိုကျစဈပိုငျးမှာတော့ ဝါရငျ့တိုကျစဈကစားသမား ဘနျတနာ ဒဏျရာကွောငျ့ နှုတျထှကျသှားခဲ့ပမေယျ့ ဂိုးသှငျးခွရှေိတဲ့ ယျောဟနျဆငျ၊ ဘရိနျးအတေီ၊ ကျောနီလဈတို့လို ကစားသမားတှကေို ခွစှေမျးထကျ လူငယျတိုကျစဈ ကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ ယူဆကျဖျပျေါလျဆငျ၊ ဒိုးလျဘတျဂျတို့လို ကစားသမားတှကေို ရှေးခယျြထားပါတယျ။ ကှငျးလယျကစားသမား အဲရဈဆငျကတော့ ဒိနျးမတျအသငျးအတှကျ အဓိက စောငျ့ကွညျ့သှားရမယျ့ ကစားသမား ဖွဈပါတယျ။ ပွဈဒဏျဘော တိုကျရိုကျကနျသှငျးမှုတှေ၊ သသေပျတဲ့ အဝေးကနျခကျြတှေ၊ ကောငျးမှနျတဲ့ ဖွတျတငျပေးပို့မှုတှကေ အဲရဈဆငျရဲ့ အမှတျအသားတဈခုလိုပါပဲ။ လာမယျ့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာကော အဲရဈဆငျ ပုံစံကောငျးတှေ ပွသနိုငျဦးမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ခငျြစရာ ကောငျးနပေါတယျ။
by Naing Linn . 21 hours ago